समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नै धरापमा पर्ने खतरा छ - फ्री प्रेस नेपाल
५ आश्विन २०७६, आईतवार २२:४८
in अन्तर्वार्ता, बिचार
उग्र धार्मिक अन्धताको राजनीति उग्र राष्ट्रवादसंग जोडिएको हुन्छ । उग्र राष्ट्रवाद र उग्र धर्मान्धतावाद यो दुबै संगसंगै जान्छ ।
– हरि शर्मा, राजनीतिशास्त्री
केहि समयदेखि मेरो दिमागमा नेपाली राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी हेर्ने, यी राजनीतिक परिवर्तनमा कस्तो कस्तो धारले कसरी निर्देशित गरे, समाजमा कस्ता किसिमका आवाज उठिरहेकाछन र राजनीतिलाई केल्ले निर्देशित गरिरहेकोछ भन्ने कुरा खेलिरहेकोछ ।
औद्योगिकीकरण र कृषकहरु संगठित नभईकनै नेपालमा शुरु गरिएको माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनमा माक्र्सवादीहरुले आवश्यक ठान्ने वर्गीय आधार नै थिएन । त्यसैले होला पहिचानको राजनीतिले माओवादी आन्दोलनलाई बल पुग्न सक्छ भन्ने आँकलन गरेर बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले रणनीति बनाईयो । नेपालको बहुलतालाई प्रतिनीधित्व गर्ने गरिकन बनाईएका यस्ता रणनीतिमा उनीहरु कति इमान्दार थिए भन्ने कुरा त कालान्तरमा देखियो तर उनीहरुले पहिचानको आन्दोलनलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई निश्चित ठाउँसम्म लिएर आएको अहिलेको यथार्थता हो ।
हुन त मधेसी, जनजाति, महिला र दलित आन्दोलन माओवादीको वर्गीय आन्दोलन अगाडि देखि नै थियो । किनकी नेपाली राज्यमा सबैभन्दा बढी पिछडिएको हिन्दु बर्णब्यवस्थासगैं जन्मिएको दलित वर्ग नेपाली राज्य बन्नु अघि देखि नै अस्तित्वमा थियो । महिलाको स्थिति पनि त्यहि हो ।
पहिचानवादी यी आन्दोलनलाई सबै सत्ताले आ–आफ्नो तरिकाले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । पन्चायतले जातजातिहरुलाई संगठित गर्न खोजेकोथियो । बहुदल आईसकेपछि विभिन्न दलहरुको जातीय भातृसंगठन बनाइएकाछन् । तर राजनैतिक रुपमा सशक्त पहिचानवादी आन्दोलनहरु २०६२/६३ को आन्दोलन र संविधान निर्माणको सेरोफेरोमा चल्यो ।
पहिचानको आन्दोलनले जुन गति र दिशा लिएर निस्किएकोथियो, त्यसले कताकता आशंका जन्माएकोथियो । यसले नेपाली समाजलाई कता लैजान्छ ? यसले सही लोकतान्त्रिक दिशातर्फ लैजान्छ कि लैजान्न ? के माओवादीले वर्गीय राजनीतिबाट पार पाउने नदेखेपछि जातीय या पहिचानको आन्दोलन शुरु गरेकोहो? जसरी वामपन्थी दलहरुले यी मुद्दाहरु उठाईरहेकाछन्, के ति यसमा इमान्दार छन् ? एउटा उदार राजनीति प्रणालीमा विश्वास गर्ने ब्यक्ति भएको नाताले मेरा दिमागमा यी प्रश्नहरु उठिरहन्थे । यसका बावजुद नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पहिचानको आन्दोलनले समाजमा चेतना र जागरण ल्याउन खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिदैंन ।
तर ६२/६३ को आन्दोलनको दशबर्षपछि पहिचानवादी मुद्दाहरु ओझेलमा परेको देख्दछु । त्यसमा केहि कारण होला । आन्दोलन सधैं उद्धेलित भैरहदैंन । कहिलेकाहीं आन्दोलनहरु थाक्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई प्रश्रय नदिंदापनि ओझेलमा परिरहेको हुनसक्दछ । तर मलाई के लाग्दछ भने त्यो एउटा सशक्त आन्दोलन थियो । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई कुनैनकुनै रुपमा समावेशी बनाउने दिशातीर उन्मुख गराउने भूमिका खेल्यो । नेपालमा जातीय क्षेत्रीय बिभेदहरु छन् त्यो निरुपण हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा जातीय या पहिचानको राजनीतिले सतहमा ल्यायो, जुन सही थियो ।
बहस नपुगेको संघीयता
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामीले संविधानसभा निर्माण गर्न चारओटा ऐजेण्डा समावेशीता, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई पछ्यायौं । नेपालको बहुलता र विविधता (साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक )लाई लोकतान्त्रिक धारमा समाहित गर्नाका निमित्त विविध आन्दोलनका भावहरुबाट आउने माग र बिचारलाई समेट्न जरुरी थियो । संविधानले त्यसलाई समावेशीताको नाममा, प्रतिनीधित्वको नाममा कोटा (आरक्षण) द्धारा केहि हदसम्म निरुपण गर्न खोज्यो ।
६२/६३ आन्दोलनको सेरोफेरोमा मैले भनेको सम्झन्छु – ‘पहिचानको आन्दोलनले बाटो पहिल्याउन कठिन भएपनि सबैको प्रतिबद्धता र जागरुकताका कारण केहि न केहि निक्र्यौल यसबाट निस्केला ।’ तर सबभन्दा कठिन दुईटा मुद्दाको छिनोफानो हुन अप्ठेरो हुनेछ । एउटा संघीयता र अर्को धर्मनिरपेक्षता ।
संघीयताको बारेमा मैले बारम्बार भन्ने गरेकोछु, कुनै पनि राजनैतिक बिचार या कार्यक्रमहरु कसैले उछालिदिएर, कसैले ल्याईदिएर हुदैंन । राजनीतिमा यसको प्रयोग हुनुपर्दछ । यथेष्ट विवेचना हुनुपर्दछ । छलफल हुनुपर्दछ । जस्तो २००७ साल देखि नै राजतन्त्रको बारेमा हामीले बहस चलायौं । राजतन्त्र चाहिन्छ चाहिन्न ? राजा सबैंधानिक हुने हो कि सक्रिय हुने या लोकतान्त्रिक हुने हो ? यसमा गणतन्त्रसम्मको लामो विमर्श चलेकोछ । कुनैसमय राजतन्त्रमाथि नेपाली काग्रेंसका दुर्गानन्द झाँ र रामलक्ष्मणहरुले भौतिक आक्रमण समेत गरे ।
मान्छेलाई के लाग्थ्यो भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रश्न राजतन्त्रसंग जोडिएकोछ । राजतन्त्रलाई नै लोकतान्त्रिकरण गरेर जाने हो कि राजा बिनाको लोकतन्त्रमा जानेहो भन्ने विमर्शले अन्ततः हामीले राजाबिनाको लोकतन्त्र रोज्यौं । ७० बर्षदेखि चलिरहेको बहसका कारण जुन दिन राजा गए त्यतिबेला सबैले स्वाभाविक रुपमा लिए । यद्यपि त्यसमा दरबार हत्याकाण्डको पनि आफ्नै भूमिका थियो ।
जहाँसम्म संघीयताको प्रश्न छ, त्यसमा यथेष्ट बहस नै हुनपाएन । सैद्धान्तिक रुपले ‘संघीयता नेपालमा आवश्यक छ कि छैन’ भन्ने बिषयमा म घण्टौ बहस गर्न सकुला तर अहिले संघीयता नेपालको सबैंधानिक यथार्थ हो । शुरुका दिनहरुमा जातीय संघीयताको प्रश्न उठेको हामी पाउँदछौं । मधेसी दलहरुले जात भन्दा क्षेत्रीयताको आधारमा संघीयतालाई उठाए । राजनैतिक दलहरुद्धारा हामीलाई के भनियोभने संघीयतामा गैसकेपछि जनता अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । शक्ति तल्लो तहसम्म पुग्दछ । नेपालको बहुलता र विविधताको प्रतिनीधित्व हुन्छ ।
संघीयता बस्तुतः नेपालको विविधता र बहुलतालाई संस्थागत रुप दिने परिपाटी नै हो । नेपालको बहुलतालाई समेट्न, तिनले आफ्नो प्रतीनिधित्व प्राप्त गर्नका निम्ति र अपनत्व महसुस गर्ने सरकारको परिकल्पनाको आधारमा हामीलाई संघीयता चाहिएकोथियो । यसको सफल कार्यान्वयन नेतृत्वको इमान्दारितामा भर पर्दछ । संघीयता जस्ता कुनैपनि संबैधानिक प्रावधानहरुलाई कति ईमान्दारिताका साथ प्रयोग गरिएकोछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि ब्यवस्था तबसम्म पूर्णरुपेण परिपक्व हुदैंन जबसम्म त्यसलाई प्रयोग गरिदैंन । संविधान लागु भएको चार बर्ष भयो । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता पूर्णरुपले लागु भएको र निर्वाचन मार्फत संघीय संरचनाहरु बनाइएको दुई बर्ष भयो । तर यसमा नेतृत्व ईमान्दार देखिएन । दलहरु लोभिपापी देखिए ।
विभिन्न बहाना बनाएर संघीयताले काम गर्न सकेन भन्दै मजाक उडाउने काम भैरहेकाछन् । संघीयताका कारण मुलुकमा अस्थिरता आउँछ भन्दै संस्थापन पार्टी र जिम्मेवार नेतृत्वहरुबाटै टिप्पणी गरिएकाछन् । बिपक्षी दलहरुबाट समेत यही कुरा सुन्दा सुन्दा मन खिन्न हुन्छ । किनकी यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ईमान्दारिताको मनोदशा देखाउँदछ । संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नै प्रकारको चुनौती छ । यसका संस्थागत चुनौतीहरु छन् । कतिपय कुराहरु चित्त बुझ्दैनन् तर बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि समाजको हितका लागि जे प्रावधान हामीले बनाएकाछौं त्यसैमा परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो । चुनौतीहरु हुन्छन् । त्यसलाई सबैले मिलेर हल गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसका लागि सुझबुझ चाहिन्छ । यदि संघीयताको जग हल्लियो भने संबैधानिक जग हल्लिन सक्ने सम्भावना देख्दछु, म । त्यसैले हामी संघीयताको बारेमा सजग र चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेतृत्वले जुन किसिमको अभिब्यक्ति दिइरहेकाछन्, जुन किसिमको बेईमानी संघीयताको प्रयोगको सन्दर्भमा भएकोछ त्यसले मनमा खिन्नता महसुस गराउँदो रहेछ । संघीयताको कठिनाई बारे बोल्नुपर्दा आइरहेको ‘संघीयताले काम गर्दैन’ भन्ने अभिब्यक्ति अत्यन्त गैरजिम्मेवारी अभिब्यक्ति हो ।
पूणरुपमा लागु नभइकपनि मानिसहरुले संघीयता महगो भयो भन्ने नाउँमा प्रश्न गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वबाटै जुन किसिमका संशय आईरहेकाछन्, त्यो दुखद हो । किनभने ४ बर्षभित्रै राजनैतिक संस्थाहरुले फटाफट काम गर्ने र डेलिभर गर्न सक्ने होईन, समय लाग्दछ । कति तदारुकता छ कति ईमान्दारिता छ भन्ने मूल कुरा हो । हामीले त्यो हो हेर्ने । दुखद के हो भने त्यो इमान्दारिता पनि देखिएन ।
हामीलाई लागेकोथियो कर्मचारीहरु तल जान्छन् । काम तल जान्छ । अधिकार तल जान्छ । मान्छेलाई काठमाण्डौ धाइरहनु पर्दैन । जनताले घरदैलोमा सेवा र सुविधा अनुभूति गर्नसक्दछन् । गाउँघरमा सिंहदरबार पुग्ने भनिएकोथियो । अहिले ठिक उल्टो भैरहेकोछ । उल्टो पिरामीड बनाईदैंछ । कर्मचारी समायोजनको नाममा अझै ४० हजार कर्मचारी केन्द्रमा थप्ने भनिएकोछ । उल्टो पिरामीडको रुपमा कर्मचारीको भार केन्द्रमा छ । संघीयताले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरु बलियो हुन्छ भन्ने ठानिएकोथियो तर शक्ति केन्द्रिकृत गर्न लागिएको छ । हो, संघीयता मधेसवादी दलहरुले उठाए । जसरी संघीयतालाई यहाँसम्म ल्याईपुर्याईयो यो आवश्यक थियो कि थिएन ? त्यतातीर म जान चाहदिंन । यदि अगाडिको बाटो तय गर्ने हो भने धेरै पछाडि फर्कन उचित ठान्दिन । स्पष्टतः यो संविधानलाई काम गर्न दिईनुपर्दछ ।
तीन मण्डलको सरकार छ । मान्छेले यसलाई तीन तह भन्छन् । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीनवटै सरकारको हैसियत बराबर हो । किनभने सबैमा विधायकी अधिकार छ । तिनलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरि बनाएकाहुन् । तर जसरी यसलाई तहगत रुपमा बुझी एकअर्काको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने मनस्थिति बढेकोछ त्यसले नेपाली राजनीतिक नेतृत्व जतिसुकै परिवर्तनको सँघार तरेर आएपनि केन्द्रिकृत सोंचको छ भन्ने देखिएकोछ । त्यसैले जनता चनाखो हुन जरुरी छ भनेकोहुँ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएर निर्वाचन मार्फत संस्थाहरु निर्माण भैसके । स्थानीय सरकार बनिसक्यो । प्रादेशिक र संघीय सरकार बनिसक्यो । यसको अन्तरसमन्वय के हुने, श्रोतको बाँडफाँड के हुने, जनताले यसलाई कसरी बुझ्ने भनि अभ्यास भैरहेकाछन् । प्रादेशिक श्रोत र साधनको बाँडफाँडको सन्दर्भमा बल्ल आयोग बनेकोछ, त्यसले काम गरेकोछैन । यी पर्याप्त छैनन् । हो, समय लाग्दछ । त्यो धैर्यताको निम्ति सरकार र सत्तामा बस्ने मानिसहरु, राजनैतिक दलहरु र प्रतिपक्ष सबैमा धैर्यता हुनुपर्यो । जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्यो । हामीले यो यो काम गरेका छौं । यसका कठिनाई यी यी छन्, हामी बाटो छाडिरहेकाछैनौ भन्नुपर्यो । तर मलाई लागेको चिन्ता के हो भने यसरी जनचेतना जगाउने काम भएकैछैन । पब्लिक एजुकेशन शून्य छ । राजनीतिक शिक्षा शून्य छ ।
राजनीति परिवर्तनका निम्ति हो । राजनीति भनेको संस्थाहरु निर्माण गर्नका निम्ति हो भन्ने खालका चेत हामीले देख्न पाएका छैनौं । सारा मान्छेका इच्छा र कामना पनि बिकास निर्माणमा मात्र छ । नीति निर्माणमा छैन । दिर्घकालिन सोंचका दृष्टिकोणबाट संस्थाहरु निर्माण हुनुपर्छ भन्ने देखिदैंन ।
संविधानमा भएका संरचनाका अमूर्त शब्दहरुलाई जनताले निर्वाचन मार्फत मूर्त गराइदिए । संविधानमा स्थानीय सरकार भनिएकोथियो जनताले भोट दिए, मान्छे आए सरकार बनाए । अब जिम्मेवारी लिने जो जो मानिसहरु आएकाछन्, तिनको हो । ति मानिसहरुले संस्थालाई चलायमान बनाउने हो । समय अनुसार काम गर्नसक्ने, समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नसक्ने र त्यो सकेन भनेपनि बसेर छलफल गरेर उपाय निकाल्ने प्रयत्न गर्ने काम तिनैको हो ।
नेपाली समाजमा पर्याप्त मात्रामा बहस नगरिएको अर्काे मुद्दा हो, धर्मनिरपेक्षता । धर्मनिरपेक्षताका कारण संघीयता धरापमा पर्छ कि संघीयताले धर्मनिरपेक्षतालाई धरापमा पार्छ भन्ने कुरामा म अलमलमा छु । तर मलाई के लागिरहेकोछ भने नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता एकअर्काका परिपूरक हुन् ।
संघीयताको अर्काे शर्त के थियो भने राज्यको धर्म हुदैंन । यो समावेशी राज्य हो । यसले सबैलाई समेटेर लिएर जान्छ । संघीयताले विभिन्न जातजाति भाषाभाषी धर्म क्षेत्रलाई समेट्छ भनिएकोथियो । त्यसैले नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षतालाई एकमतले संविधानमा हाल्यौं ।
राज्यको धर्म हुन्छ कि हुदैन भन्ने हो भने राज्यको धर्म हुदैंन । राज्यको कुनै मठ मन्दिर हुदैंन, मस्जिद हुदैन, गुम्बा हुदैंन । राज्यको धर्म भनेको जनकल्याण हो ।राज्यका देउता जनता जनार्दन हुन् । राजनीतिज्ञ र हामीहरु त्यसका पुजारी हौं । धेरै मान्छेहरुले धर्मलाई मानिसको रहनसहन,रितिरिवाज, सँस्कृतिसंग जोडेर हेरिरहेकाछन् । बहुसंख्यक मान्छे हिन्दु छन् । नेपाल हिन्दु राज्य नभई के हुने त भन्ने यदाकदा सुनिन्छ । हिन्दु धर्म आफैमा यति बहुल छ कि त्यसैले त्यहाँ तेत्तिसकोटी देवीदेउता छन् । हरेकलाई आफ्नो देउता मान्ने, जात्रा मान्ने अधिकार भएकोले नै यो सबैभन्दा बढी धर्मनिरपेक्ष धर्म हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।
यसलाई प्रयोग गरेर जातजातिको बीचमा बैमनस्यता फैलाउने, कुनै एउटा समूहको वर्चश्व खडा गर्ने र राजनीतिलाई एकाधिकारसम्पन्न बनाउन खोज्ने जुन किसिमको गाईंगुई सुनिदैंछ त्यो समाजको लागि श्रेयस्कर छैन । त्यसमाथि अहिले विगतमा रमाउने, त्यसमा गर्व गर्ने र अनिश्चय भविष्यबाट तर्सने पुरातनवादी दक्षिणपन्थी शक्ति सल्बलाएको देखिन्छ ।
दुई तिहाईको सरकार भनिन्छ । हरेक पत्रपत्रिकाले बारम्बार यहि दोहोर्याईरहन्छ । यो किन भनिन्छ । कसको तुष्टिको लागि गरिन्छ मैले बुझेको छुईन । तर हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको जगमा उभिएको यो सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन सकिरहेकोछैन । नेताहरु लोभीपापी भएकाछन् । सबभन्दा ठुलो कुरा जनताको आवाज, इच्छा आकांक्षालाई सुन्न खोजिरहेकोछैन ।
यदि राजनीतिक रुपमा सरकार दुई तिहाईको हो भने यसले सबै जातजाति, धर्म, भाषाभाषी र संस्कृति मान्ने मानिसहरुको सरकार होे भन्नुपर्यो । राज्य त्यो पनि भन्न सकिरहेकोछैन । उ म सबै भाषाभाषी जातजातिको प्रतिनीधित्व गर्छु पनि भन्न सक्दैन । उ एकांकी रुपमा सकींर्ण राष्ट्रवादको झण्डा बोकेर हिंडिरहेकोे देखिरहेकोछु । कताकता यसले जुन किसिमको दक्षिणपन्थको बाटो समात्न खोजेकोछ त्यसले शुभ संकेत गर्दैन ।
संविधानमा धर्मनिरपेक्षता त भनियो तर यो कसरी लागु हुन्छ? यसका पोलिसीहरु के के हुन् ? नेपाल धर्मनिरपेक्ष हो भन्नाका निम्ति कस्तो किसिमको ब्यवहार, आचरण वा कानुनी प्रावधानहरु चाहिन्छ ? त्यो अझैसम्म हामीले खासै भोगिरहेकाछैनौ । राज्यमा बस्ने अधिकाँश मान्छेको चरित्र तथा ब्यवहार एउटा पारम्पारिक धर्मको पक्षमा गएको देखिन्छ ।
अरु बिषयमा जस्तो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा त्यति चर्चा परिचर्चा उठेन । त्यहि कमजोरीको फाईदा उठाई धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरुले अहिले प्रश्न गरिरहेका देखिन्छन् । विश्वमा एउटा मात्र हिन्दु राष्ट्रको कामना अझै मरिसकेको रहेनछ भन्ने देखिइरहेकोछु जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । भारतको निर्वाचनमा दोश्रोपल्ट नरेन्द्र मोदी जुन किसिमले प्रचण्ड बहुमतका साथ जितेर आए त्यसले धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरु हौसिएका देखिन्छन् । हाम्रा सिमाना जोडिएको क्षेत्रहरुमा जसरी राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) को नेतृत्वमा रुढीवादी हिन्दुत्वको बर्चश्व आयो त्यसले यहाँको पारम्पारिक शक्तिहरु पुनःपरिचालित भएको र उत्साहित भएको देखिन्छ । अर्काे दुर्भाग्य के हो भने हरेक राजनैतिक दलमा हिन्दुत्ववादीहरु छन्, जसले धर्मनिरपेक्षता रुचाएका छैनन । त्यो सत्ताधारी नेकपामा पनि छ काग्रेंसमा पनि बलियो छ । यो हरेक पार्टीमा कुनै न कुनै रुपमा बिद्यमान छ ।
धर्मको नाममा संकीर्णतावाद भित्रयाउने परम्परावादी हिन्दुत्वादीहरुले ल्याउने उग्र धार्मिक अन्धताको राजनीति उग्र राष्ट्रवादसंग जोडिएको हुन्छ । उग्र राष्ट्रवाद र उग्र धर्मान्धतावाद यो दुबै संगसंगै जान्छ । हामीले सोंचेको राष्ट्रवाद सबैलाई समेटेर लैजाने राष्टुवाद हो । जातजातिलाई निषेध नगर्ने एउटा सामूहिक भावलाई समेट्ने राष्ट्रवाद हो । भोलि हिन्दु राष्ट्रवादको कुरा नेपालमा पस्यो भने अल्पसंख्यकहरुको स्थिति के हुन्छ ? आज एउटा झण्डाले हामी सबैलाई समाहित गरिरा’को छ भने भोलि त्यो झण्डाको रातो र निलो रंगको परिभाषा र सूर्य र चन्द्रलाई कुनै धर्म विशेषसित जोडियो भने त्यसले कस्तो स्वरुप लेला ?
भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयसगैं फैलिएको एकात्मक हिन्दुत्ववादी सोंचले हिन्दु बाहेक अरु भारतीय होईनन भन्दछ । कुनैबेला यहाँका शासकहरुले सबै पन्च नेपाली भनेजस्तै अहिले भारतमा सबै हिन्दु भारतीय सबै भारतीय हिन्दु भन्न लगाइएकोछ । मोदीको डिजाईन त्यो भन्दा अगाडि बढिरहेकोछ । काश्मीर प्रकरणपछि भारतीय शासकमा मैले संघीयतालाई जतिबेला पनि चलाउन सक्छु भन्ने आत्मबल बढेकोछ । अब उसले आरक्षणमाथि प्रहार गर्नेछ । किनभने अहिलेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार आरक्षणको पक्षमा छै्रन । त्यहाँ आरक्षणमा हिर्काउने बित्तिकै यहाँ समावेशीताको सिद्धान्तमाथि प्रहार हुनेछ । यहाँ समावेशीताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने धेरै मान्छे छन्, जो दक्षिणपन्थी हुन् ।
दलभित्रका मान्छेले पनि यो दलितलाई ल्याएर के भयो, महिलालाई ल्याएर के भयो भनिरहेकाछन् । काग्रेंस त होस हराएकोछ । उ के पिएर बसेकोछ पत्तो छैन । तर अलि बाठो भनिएको मध्य पहाडको पार्टी तत्कालिन एमालेमा झन यो बढी छ । त्यो दलमा समावेशीताको सन्दर्भमा संशय देखिन्छ । बेइमानी देखिन्छ । यो रोग सबै दलहरुमा छ । भारतमा आरक्षणमाथि अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै यहाापनि आल्हादित र उत्साहित हुने वर्ग देख्दछु ।
आरक्षणमा हिर्काएपनि तत्काल भाजपाले धर्मनिरपेक्षता चलाउँदैन । अर्काे चुनावको मुखमा उसले त्यसमा पनि खेल्नेछ । सबै हिन्दुहरुलाई प्रभावमा ल्याउन संविधान संशोधन मार्फत धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार गर्ने प्रयास गर्नेछ । अहिले भारतमा संविधानको आधारभूत चरित्रलाई बदल्न पाईन्छ कि पाईंदैन भनेर बहस चलिरहेकोछ । भाजपाको पपुलिष्ट सरकारले जनताले मत दिइसकेपछि सबैधानिक प्रावधानहरु र मान्यताले अर्थ राख्दैनन्, ती जनताको मत भन्दा तल हुन्छन् भन्ने अथ्र्याइरहेकोछ । हाम्रोमा पनि जसरी संसदमा चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ, नीति नियम बनाउने सन्दर्भ देखिन्छ । सर्वाेच्च भनेको जनता हो । जनताले हामीलाई भोट दिएर जिताएपछि संविधान त हामी चुट्कीको भरमा संशोधन गरिदिन्छौं, संविधानलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छौ भन्ने दम्भ देखाईरहेकाछन् ।
भारतीय शासकको कदमलाई हाम्रो शासकले कसरी लिन्छन् भन्ने हो । अहिले भारतीय संघीयता जसरी ‘फ्रजाइल’ भएकोछ, यदि हाम्रा नेतृत्वले संघीयताकाबारे नकारात्मक सोंचहरु बढाउँदै गएमा र कुत्सित मनसाय राखेमा हाम्रो संघले पनि काम गर्न छाड्नेछ । त्यसो भएमा परम्परावादी र हिन्दुत्ववादी शक्तिहरुले त्यसमा खेल्नेछन् ।
भारतमा भाजपाको उदय । दुर्भाग्यपूर्ण नाकाबन्दी । मोदीको नेपाल आएर दिएको एक प्रकारको अभिब्यक्ति र भारतमा फर्किएपछि अर्काे किसिमको ब्यवहार । यो सबले गर्दा कुण्ठित नेपाली मनलाई राष्ट्रवादको न्यानो कम्बलतीर धकेल्यो । हामीहरु धेरै भावुक भयौं । त्यसैको फाईदा उठाएर अहिले धर्मको नाममा विभिन्न किसिमका पुरातनवादी शक्तिहरु सल्बलाईरहेको देखिन्छ । हुनत पृष्ठभूमीमा धेरै ठुलो रक्तपात भएकोथियो । तर जसरी राजा चुपचाप गाडी चलाएर दरबारबाट निस्किए, त्यो बडो अनौठो दृश्य थियो । त्यसपछि नेपाली समाजमा हामीले कुनैप्रकारको उथलपुथल देखेकाथिएनौं । शायद उनीहरु मौकाको खोजिमा बसिरहेकाथिए । त्यो शक्तिले लोकतान्त्रिक परिवर्तन हुदैं गर्दा गुमेको आफ्नो वर्चश्व फर्काउने प्रयत्न गर्नै नै भो ।
अहिले केहि मान्छेहरुले जुनप्रकारका कुराहरु उठाईरहेकाछन, पुराना राजावादी भनौं या धर्मान्धतावादी भनौं अथवा पुरातनवादी शक्तिहरु त्यसलाई कस्ले ठाउँ दियो त ? यस्ता शक्तिलाई कल्ले दिन्छ त मौका भन्दा जुन शक्तिको हातमा डाडुपन्यू छ, उसैले दिन्छ । बिरालो त दुध खान बसेकै छ । दुधको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका मान्छे निदाउनु भनेको सरासर बेइमानी हो । त्यसको राजनीतिक निरुपण कसरी हुन्छ ? अहिलेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो,यो ।
राजनैतिक प्रशिक्षणमा नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको अर्थ के हो ? चुनौती के हो ? स्थानीय सरकारको चुनौती के हो ? नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन पक्ष के हो ? कसैले कुरा गरेकोछैन । मैले माथि भनिसके राज्यको धर्म हुदैंन । धर्म हुदैंन र यसले न्याय दिन्छ भन्ने अनभूति जनतालाई कसरी दिने भन्ने कुरा राजनेताहरु र पढेलेखेका मान्छेहरुबाट आउन सक्नुपर्दछ । मेरो लागि धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको पदमा बसेको मान्छेले धर्मलाई लिएर कुनै किसिमको निर्णय गर्छ कि गर्दैन ? धर्मको नाममा भेदभाव गर्छ कि गर्दैन ? राज्यको निर्णय लागु गर्ने बेला धर्मको आधार टेकेर अर्काे धर्ममा विश्वास राख्ने मान्छे र अर्को साँस्कृतिक वातावरणमा हुर्केको मान्छेलाई अन्याय गर्छ कि गर्दैन ?
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्यले आफ्नो नीति नियम बनाउँदा या न्याय दिने बेला धर्मको अग्रण्ँी भूमिका हुदैंन । यो जटिल बिषय छ । नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता के हो भनेर धेरै मन्थन हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म कुनैपनि राजनेता र संविधान बनाउन ठुलो दुख गर्यौं भन्नेहरु, विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसरहरुले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा सम्पादकीय पृष्ठमा लेखेको देखिएकोछैन । मैलेपनि लेख्नुपथ्र्याे होला । भएकोछैन । नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने सामूहिक चेतना बिकसित नै भएकोछैन । त्यो नहुँदासम्म यो बिषय विभाजनको कारक बन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
संबैधानिक मान्यता हुन्छ । संबैधानिक मर्म हुन्छ । संविधान भन्दा ठुलो संविधानवाद हुन्छ । संविधान भनेको एउटा प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा विश्वास हुन्छ । बहुमतको नाममा संविधानको नाम जपेर संविधानवाद हत्याउन चाहने मान्छेहरुबाट हामीलाई सबैभन्दा ठुलो थ्रेट छ । पछिल्लो समय संसारैभरी सरकारका प्रतीनिधिहरुलाई प्रश्न गर्दा ‘हामीलाई जनताले भोट दिएर आएकाहौं तँ बोल्ने को होस् ?‘ भन्छ । बिस्तारै प्रश्न गर्नसक्ने मान्छेहरुलाई निषेधित गर्ने परिस्थिति बढ्दै गैरहेकोछ । भारतमा मोदीको जुन किसिमको राजनीति देखिएकोछ, त्यसले पहिला संघीयतालाई हिर्कायो । त्यसले अब आरक्षणलाई हिर्काउँछ । त्यसपछि धर्मनिरपेक्षतालाई हिर्काउँछ । भारतमा मोदी आएबाट हाम्रोमा उत्साहित भएका तत्वहरु पनि छन् । नेपालमा त्यहि सिको हुने सम्भावना मैले देखेकोछु ।
प्रश्न गर्न नछाडौं
इन्द्रजात्राको सेरोफेरोमा धार्मिक अर्थात राजनैतिक रुढीवादी मान्छेहरुको जुन चलखेल देखियो । प्रधानमन्त्रीले सिंगापुर जानुअघि एउटा सबर्वदलीय बैठक डाकी जुन चिन्ता जताउनुभो त्यो केहि हदसम्म क्षणिक हुनसक्दछ, तर त्यो संकेत हो । हामीले संकेत बुझ्न जरुरी छ । हल्लाको पछाडि लाग्नु हुदैंन । ४–५ जना जम्मा भएर गरिएका जुलुस हल्ला हुनसक्दछ, तिनका स्टेटमेन्ट हल्ला हुनसक्दछ तर त्यसले संकेत गर्छ कि गर्दैन ? हामीले ध्वनीबाट संकेत छुट्याउनुपर्यो । संकेत महत्वपूर्ण छ । हिन्दु राजतन्त्र हल्ला हो कि संकेत हो ? म चाहिं संकेत देखिरहेकोछु । तर कहिलेकाहीं कसैले नदेख्नेगरि धुँवाको पर्खाल बनाई मानिसहरुलाई गुमराह बनाउने प्रयास गरिएको पनि हुन सक्दछ। यसको अरु कुनै आयामहरु छन् भने हामीले त्यसलाई पनि पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
मानिसहरु राजनीतिक गुमराह वा बिचलनबाट फर्किएर आफ्नो ठाउँमा फर्कने उपाय राजनैतिक नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक जनतालाई राजनैतिक शिक्षा दिएपछि हुने हो । आजभोलि राजनैतिक शिक्षा घटेकोछ, गुटको शिक्षा चलेकोछ । राजनैतिक मूल्य र मान्यताहरुको बारेमा मर्यादा र प्रक्रियाहरुका बारेमा जनता बेखबर छन् । जनतालाई के भनिएकोछ भने ‘तिमीले हामीलाई ५ बर्षका लागि मत दिएर पठायौं अब अर्काे निर्वाचन सम्म तिमी निश्चिन्त भएर बस । त्यतिन्जेल सम्म तिमीले टाउको दुखाईरहन पर्दैन ।’
जनताले ५ बर्षसम्म पर्खने होईन । यसको अर्थ सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्ने भनेको होईन । तर निरन्तर प्रश्न गर्न छाड्नु भएन । जनप्रतिनीधिहरुलाई घच्कच्याईरहनु पर्यो । चुप बस्नु भएन ।संकेत के हो ? हामी कता गैरहेकाछौं ? घटनाहरुले कस्ता खालका दृश्य देखाइृरहेकाछन् ? त्यो कुरा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । यत्रो बर्ष पछि आएर भारतमा धर्मनिरपेक्षता विभाजनको रेखा कोर्ने बिषय बन्यो भने हाम्रोमा त्यो हुदैंन भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अहिलेको नेतृत्वले, परिपाटीले बिश्वस्त पार्न नसकेको हुनसक्दछ या सेवा र सुविधा जनतालाई दिन नसकेर हुनसक्दछ । अर्काे, राजनैतिक रुपमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जुन किसिमको शिक्षा जनतामा जानुपर्थ्यो त्यो नगएको हुनसक्दछ । अहिले राजनैतिक दलको राजनैतिक प्रशिक्षण भन्ने त सुनिन्छ तर तिनले ‘मेरो पार्टीमा आऊ तिमीलाई यो वा त्यो पद दिन्छु ‘ भनेको मात्र देख्दछु । माला लगाउने काम गरेको मात्र देख्दछु ।
त्यसैले अहिले ४ जना मान्छेले झण्डा उठाउने बित्तिकै जुलुश निकाल्ने बित्तिकै राजा आऊ भन्ने बित्तिकै हामी सशंकित हुन्छौ । प्रधानमन्त्रीले ठुलठुला बैठक बोलाउनुहुन्छ । के ७० बर्ष देखि नेपाली जनताले लडेर ल्याएको नेपालको लोकतन्त्र एउटा जुलुशमा तर्सने हो र ? मलाई अनौठो लागिरहेकोछ । यो मनको भूत हो कि साँच्चिकै भूत हो ? हामी चनाखो चाहि हुनुपर्दछ ।
दश बर्षको जनयुद्ध र त्यसपछिको करिब २५ बर्षको राजनैतिक अस्थिरता खेपेको मुलुकले थप अस्थिरताको भारी खेप्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । हुन त राष्ट्रको जिवनमा पचास सय बर्ष केहि होईन । तैपनी हाम्रो पुस्ताले जे भोगिरहेकाछ, त्यो पुस्ताका निम्ति थप अस्थिरता थप कठिन अनुभव हुन्छ भन्ने लाग्दछ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नागरिकको हैसियतले राजनैतिक नेतृत्वलाई कसरी ईमान्दार बनाउने र कसरी त्यसलाई खबरदारी गर्दै संबैधानिक बाटोमा हिंडाउने भन्ने हो । त्यसका निम्ति पनि नागरिकले प्रश्न गर्न छाड्नु हुदैंन ।
जेवी पुन मगरले राजनीतिशास्त्री हरि शर्मासंग गरेको अन्तर्वार्ताको आधारमा तयार पारिएको आलेख ।
भिडीयोमा हेर्नाेस् –
Tags: hari sharmaopinion